Re ahia onwe gi: Otu esi ede akwukwo
Olee otu na ihe kpatara eji ede akwukwo
Sunday, July 4, 2010 Tọzdee, Ọktoba 27, 2011 Robby Ogbugbu
Emechara m otu akwụkwọ, Odida: Isi ihe na-aga nke ọma. Mgbe ndị mmadụ nụrụ maka nke a, ha na-ekele gị ma jụọ m ajụjụ ole na ole:
Ebee ka ị si nweta echiche ahụ?
Ogologo oge ole ka o were dee?
Gini mere iji choo ide akwukwo?
Enwere m ike ịza ajụjụ ọ bụla maka gị, mana m ga-agwa gị eziokwu na ha niile na-ajụ otu ajụjụ ahụ: Olee otu esi ede akwukwo? Maka ọtụtụ ndị, echiche nke ijikọ otu blog post na-ada ka ọrụ siri ike. Akwụkwọ zuru ezu yiri ka ọ gaghị ekwe omume. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ blọọgụ etinyebere na teknụzụ azụmaahịa, teknụzụ ụlọ akwụkwọ ochie nke ink na akwụkwọ ka bụ oke ahịa. Naanị jụọ ndị dere Gingde blọgụ maka Dummies.
Nke a bụ otu ị ga esi eme ya.
Kwụpụ 1: Kpebie ihe kpatara ya
Ajụjụ nke mbụ na nke kachasị mkpa banyere ide akwụkwọ na-aza ajụjụ a “Gịnị mere m ji chọọ ide akwụkwọ?” O nwere ike ịbụ ihe efu efu. O nwere ike ịbụ n'ihi na akwụkwọ ịchọrọ ịgụrụ adịghị (ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ị chọtabeghị ya.) Ma ọ bụ, ọ nwere ike ịbụ naanị n'ihi na ịchọrọ ịme ihe siri ike na ihe ọhụụ.
N'agbanyeghị ihe kpatara gị, ị ghaghi idobe “ihe kpatara” ihu na etiti n’etiti usoro ịmepụta akwụkwọ gị. Ọ bụrụ n ’ileghara ebumnuche akwụkwọ gị anya, ị ga-akwụsị ịrụ ọrụ na ya. Ma ọ bụ ka njọ, akwụkwọ gị ga-awagharị gaa na ihe ọzọ.
(Rịba ama: Ọ dị mma ịchọpụta ebumnuche gị ka ị na-aga wee gbanwee ihe kpatara "gịnị kpatara", mana jiri akọ na-eme ya! Ka emechara, ọ bụrụ na ị gbanwee ihe kpatara edere na-amaghị, a ga-amanye ndị na - agụ akwụkwọ gị ịgbanwe ọkara O nwere ike ọ bụghị ihe onye ọ bụla chọrọ.)
Kwụpụ 2: Chepụta Atụmatụ Ide Ihe
Ofdị akwụkwọ dị iche iche chọrọ usoro dị iche iche n'usoro ederede. Maka akwụkwọ m, usoro ahụ gụnyere na-emepe emepe, imepụta ihe ndepụta, nyocha akụkọ n'ikpeazụ ide na edezi. Ọ bụrụ n ’ị na-agwa akụkọ ncheta, ị nwere ike ịnwe atụmatụ dị iche. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ a nkwusa dị ka akụkụ nke usoro (dị ka Doug na Chantelle akwụkwọ na ụlọ ọrụ ịde blọgụ maka “Ugbo“), Ha nwere ike inye gị ụfọdụ ihe owuwu a.
Akụkụ dị mkpa nke atụmatụ ederede gị bụ idobere oge iji rụọ ọrụ na akwụkwọ gị. Gaa na kalenda gị ma gbochie "oge ederede." Ezi atụmatụ bụ Okwu 150 kwa awa. Yabụ ọ bụrụ n’echiche na ị nwere ike ide akwụkwọ okwu 30,000, nke ahụ bụ ihe dịka 200 awa. Gaa na kalenda gị wee gbochie oge 200 maka "ederede akwụkwọ." Ọ bụrụ na ị gbasoro usoro ihe omume gị, ị ga-enwe ọganihu dị ukwuu karịa ka ị nwere ike iche.
Kwụpụ 3: Buru Ngwaọrụ gị
Enwere ọtụtụ arụmụka banyere ụzọ kacha mma iji dee, mana m ga-agwa gị nke a: ka ị nwere ike ilekwasị anya, ka ị nwere ike ide. Abụ m onye ofufe nke Google Docs gafere usoro nhazi okwu ọdịnala, n'ihi na ọ na-eme ka ị ghara ichegbu onwe gị banyere nhazi na enwere ike ịnweta ya n'ebe ọ bụla. Gị na onye ndezi gị nwere ike banye n’otu oge!
You nwere ike ịga zen na ngwanrọ dịka Ommwriter ma ọ bụ dị nnọọ ochie gaferela Moleskine dee. N'agbanyeghị ihe ị họọrọ, jiri obi gị mee ya.
Kwụpụ 4: Nọgide na Atụmatụ Gị
Nke a adighi ka otutu ihe, ma o bu ebe otutu ndi dere akwukwo ga-enwe nsogbu. Na-arụsi ọrụ ike na ọrụ ndị ọzọ, ndụ na-emetụta akwụkwọ gị. Ọ bụrụ na emechara akwụkwọ niile agbahapụla n'ụwa, anyị nwere ike inwe puku akwụkwọ karịa na shelf. Lekwasị anya! Cheta “ihe mere” gị. Sọpụrụ atụmatụ ide ihe gị.
Greatzọ dị mma iji kpachara anya bụ gwa ndị ị tụkwasịrị obi na ị na-ede akwụkwọ. Gwa ha ka ha mee jụọ gị gbasara ya! Nke a ga - enyere gị aka ịnọ na egwu.
Kwụpụ 5: Bipụta ma kwalite
Maka m, akụkụ kacha sie ike ide akwụkwọ bụ ire ya. Ire ahia na nkwalite abughi ihe m. Ekwesịrị m ịgbalịsi ike ịrịọ ndị mmadụ ka ha zụta otu. (Kedu nke m chere, ana m eme ya ugbu a. Were a anya!)
Ma taa, ị nwere ike ịkwalite teknụzụ iji zụọ akwụkwọ akwụkwọ oge ochie. Tọọ blog akwụkwọ. Na-akwalite akwụkwọ ahụ na Twitter yana a Facebook Page. Rịọ ajụjụ ọnụ na ndị na-agba blọọgụ, mmemme redio intaneti ma ọ bụ isi mmalite mgbasa ozi ndị ọzọ. Iru eru ma mee ka ọrụ gị nwee ihe ịga nke ọma!
Ndị na-eduzi ahịa ahịa… err .. Consultants
Ọkt 27, 2011 na 10:55 PM
Ebe m dere akwụkwọ mbụ m (ana m atụ anya ide ihe), enwere nnukwu ọdịiche na etu ndị mmadụ si were gị dị ka onye edemede. Adịghị m ama karịa karịa tupu m ede akwụkwọ ahụ, yabụ mgbe ụfọdụ ọ na-eju m anya na mmeghachi omume. Agbanyeghị, aga m ewere ihe m nwere ike inweta!